August 27, 2019 - Myitter
စက်ဘီးအစီးပေါင်း ၁သန်း ကိုဝယ်ယူပြီး မြန်မာနိူင်ငံကျောင်းသူ/သားများကို လှူဒါန်းမှု
August 27, 2019 Myitter 0
စက်ဘီးအစီးပေါင်း ၁သန်း ကိုဝယ်ယူပြီး မြန်မာနိူင်ငံကျောင်းသူ/သားများကို လှူဒါန်းမှု 20/6/2019နေ့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက် အငယ်ဆုံးနဲ့အလှူ အတန်းအရက်ရောဆုံး,မလေးရှား တစ်နိုင်ငံလုံးက ဂုဏ်ယူနေတဲ့ လေစားစရာ အသက်ငယ်ဆုံး အလှူရှင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို Sin Chew Daily သတင်းစာရဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်—– သူ့နံမည်ကတော့ Mike Than Tun […]
ပြင်ဦးလွင်မြို့သည် ပုံမှန်အခြေအနေမှာရှိနေ Tuesday, August 27, 2019 ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်ဆိုသည့် ကောလာဟလတွေကြောင့် လာရောက်လည်ပတ်သူ နည်းပါးနေကြောင်း သိရသည်။ ယခုလို ကောလာဟလများကြောင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ ပကတိအခြေနေမှာ လုံခြုံအေးချမ်းမှုရှိနေကြောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု မရှိစေရန် ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “ကောလာဟလတွေထွက်တဲ့အခါ ပြင်ဦးလွင်ကို […]
တယ်လီဖုန်းဘေလ်များမှ မှားယွင်းစွာ ဖြတ်တောက်ခံရသည့် ဖြစ်ရပ်များ ရှိနေတာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီးပြောကြား တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲသည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် အပိုဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဝဘ်ဆိုဒ် ကြော်ညာများမှဖြစ်စေ၊ SMS စာတိုများမှဖြစ်စေ မတော် တဆ (သို့) လွဲမှား၍နှိပ်မိခြင်းကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသကဲ့သို့ ဖြစ်စေပြီး ဝန်ဆောင်ခ များကို […]
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့လယ်ကောင် မြကျွန်းသာအိမ်ရာအနီးမှာ သြဂုတ် ၂၅ ရက် ညနေပိုင်းက လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို တုတ်၊ ဓားလက်နက်တွေနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်တဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ မြကျွန်းသာအိမ်ရာအနီးမှာ အရက်သောက်ထားတဲ့ မင်းကို၊ ဝိုင်းချစ်နဲ့ ထွေးကိုပါ လူငယ် ၁၀ ဦးက ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက […]
အမေ ကိုးကွယ်တာ ဒီလိုဆရာတော်မျိုး … ကြည်ညိုပူဇော် တိပိဋက ယောဆရာတော်ဘုရား ယောဆရာတော် သီတင်းသုံးတော်မူသည့် ကျောင်းဆောင်၌ အဲယားကွန်း (လေအေးစက်) လုံးဝ မထား။ တိုင်ကပ် လေပန်ကာ နှစ်လုံးသာရှိသည်။ ထိုလေပန်ကာကိုလည်း ယောဆရာတော် တစ်ပါးတည်း ရှိနေလျှင် ဖွင့်လေ့မရှိ။ ဆွမ်းအလှူရှင်များကို တရားဟောသည့် အချိန်မှသာ […]
တစ်ခါက. . . တစ်နှစ်မှာ ၁၀ လလောက် ရေခဲနေတတ်တဲ့ တောမကျ မြို့မကျ ရွာလေးတစ်ခုမှာပေါ့ … ဆောင်းတွင်းရောက်လာတယ်။ နှင်းတွေကလည်းကျလိုက်တာ။ ရေခဲမှတ်အောက်ကို အနှုတ် ၃၀ ဒီဂရီလောက်ရောက်နေပြီ။ ဒီနေရာလေးဟာ သုံးနှစ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်နှင်းမုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခိုက်တတ်တယ်။နှင်းမုန်တိုင်းတွေကျပြီဆိုရင် ရေခဲတောင်တွေပြိုတယ်။အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဒေသကလူတွေဟာ […]
မကြားဘူးတာတွေ မြင်ရတော့မယ် သြော် – – – မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ အင်အားများတဲ့အခါတိုင်းကပ်သုံးပါးဆိုက်တဲ့အကြောင်းတွေ စာပေတွေအမြောက်အများ ဖတ်ရှု့ဘူးခဲ့ပါတယ် အစာရေစာ ရှားပါးတဲ့ကပ် မီးလောင် ရေကြီး စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ် နဲ့ လက်နတ်တွေနဲ့ မညှာမတာ သတ်ကြဖြစ်ကြတဲ့ကပ် ရောဂါအမျိုးမျိုး ကျရောက်ပြီ လူတွေသေတဲ့ကပ် အဲဒီကပ်သုံးပါးဆိုက်ပြီဆိုရင် စစ်ဖြစ်လို […]
ဘယ်လောက်ပဲ ယုံကြည်ရသူဖြစ်ပါစေ.. သူတပါးအား လုံးဝ မပြောပြသင့်သော အရာကြီး ကိုးပါး…
ဘယ်လောက်ပဲ ယုံကြည်ရသူဖြစ်ပါစေ.. သူတပါးအား လုံးဝ မပြောပြသင့်သော အရာကြီး ကိုးပါး… ထိုအကြောင်းတရား ကိုးပါးကို ထင်ရှားစွာ ထုတ်ဖေါ် မဆိုရာဟု ဟိတောပဒေသ၌ လာရှိ၏၊မလုံခြုံက ပျက်စီးကျိုးမဲ့ ဖြစ်တတ်သည်။ (၁) အာယု- မိမိနေရအံ့သော အသက်အပိုင်းအခြား၊ (၂) ဝိတ္တ- မိမိပိုင် စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရတနာဟူသမျှ၊ […]
ငွေကျပ် သိန်း ၂၀ ပိုက်ဆံထုပ်ကြီး ကို ခွေးတစ်ကောင်က အစာထင်ပြီး ကိုက်ချီလာ သောအခါ
ငွေကျပ် သိန်း ၂၀ ပိုက်ဆံထုပ်ကြီး ကို ခွေးတစ်ကောင်က အစာထင်ပြီး ကိုက်ချီလာ သောအခါ မြန်မာစကားပုံမှာ ရေအဆုံး ကုန်းတဝက်ဆိုပြီး ဆိုရိုးစကားလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရေထဲကျပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ပ စ္စည်းဟာ ပြန်မရတော့လို့ ဆုံးရှုံးပြီလို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ၊ ကုန်းပေါ်မှာ ကျပျောက်သွားတာတော့ […]
ကျူးကျော်ရပ်ကွက်က အထမ်းသမားရဲ့သား ဘဝမှ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ “ဂျက်လီ” ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
အတန်းကျောင်း–၂–တန်းပဲ တက်ခဲ့ရပေမယ့် အာရှရဲ့ –သရုပ်ဆောင် ဘုရင်—#JET_LI—အကြောင်း- ( ၂၁ရာစုကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးဆုံးသရုပ် ဆောင်၁၀၀ထဲမှတစ်ဦး (သို့) အာရှရဲ့ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေသောမင်းသားများထဲမှတစ်ဦး(သို့)ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှ ရတနာတခုရဲ့အတ္ထုပတ္တိ ) . “လူတွေကိုရယ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်မှာမျက်ရည်တွေပေးဆပ်ထားရတယ်။ကိုယ်ငိုပြမှ လူတွေရယ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကမှာခက်တာမရှိဘူး” #ဂျက်လီ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ရက်နေ့။ အခြေအနေရော အချိန်အခါရောအဆိုးဖက်မှာရှိနေချိန် မိသားစုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲမူကိုလွန်ပြီး တနေ့ထမင်း၂နှပ်တောင်နပ်မှန်အောင်ရုန်းကုန်နေရတဲ့အချိန် တရုတ်နိုင်ငံ […]